पश्चिमा मुलुकमा शुक्राणु संकट, मानव जाति नै लोप हुने चिन्ता - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । पश्चिमी मुलुकका पुरुषहरुमा शुक्राणुहरुको संख्यामा नाटकीय रुपमा कमी आएको खुलासा भएको छ । नयाँ अनुसन्धानले अमेरिका र यूरोपीयन क्षेत्रका पुरुषको वीर्यमा ५० प्रतिशतले शुक्राणु घटेको देखाएपछि यसले ठूलो हलचल मच्चाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस रूसविरुद्ध पश्चिमा मुलुकको मोर्चाबन्दी किन ?
याे पनि पढ्नुस पातलो वीर्यले सन्तान हुँदैन् ?
ट्याग्स: पश्चिमा देश, शुक्रकीट